Family – Alpha Premium
Bro Daddy (2022) (App only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့အိန်ဒိယဟာသကားလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ကာတာဒီနဲ့ကူရီရနျမိသားစုနှဈစုဟာအရမျးကိုရငျးနှီးကွတဲ့မိသားစုနှဈစုဖွဈပါတယျ ကူရီရနျမိသားစုမှာအီခြိုဆိုတဲ့သားတဈယောကျရှိပွီး ကူရီရနျမိသားစုမှာအနျနာဆိုတဲ့သမီးတဈယောကျရှိပါတယျ နှဈယောကျလုံးဟာခတျေဆနျတဲ့လူငယျတှဖွေဈပွီးတော့လကျထပျဖို့အိမျထောငျပွုဖို့ကိုသိပျပွီးတော့ စိတျမဝငျစားကွတဲ့သူတှပေါ သူတို့မိဘတှကေသူတို့နှဈယောကျကိုလကျထပျပေးဖို့စဉျးစားနပေမေယျ့လညျး နှဈယောကျလုံးကအခငျြးခငျြးစိတျမဝငျစားဘူး လကျမထပျခငျြဘူးလို့ငွငျးဆိုနတောကွောငျ့ မိဘတှကေလကျလြှော့ခဲ့ရပါတယျ ဒါပမေယျ့အမှနျတကယျတော့အီခြိုနဲ့အနျနာတို့နှဈယောကျဟာ မိဘတှရေဲ့နောကျကှယျမှာခိုးပွီးတော့တှဲနကွေတာဖွဈပါတယျ သူတို့နှဈယောကျဟာလကျမထပျဘဲဘဝကိုပြျောပြျောနခေငျြသေးပမေယျ့တဈရကျမှာတော့ မထငျမှတျထားဘဲအနျနာတဈယောကျကိုယျဝနျရသှားပါတော့တယျ အနျနာနဲ့အီခြိုတို့နှဈယောကျသူတို့မိဘတှကေိုဘယျလိုမြိုးဖှငျ့ပွောမလဲ သူတို့နှဈယောကျလကျထပျဖို့ကိစ်စကလှယျကူနိုငျ့ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယဟာသကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ကာတာဒီနဲ့ကူရီရန်မိသားစုနှစ်စုဟာအရမ်းကိုရင်းနှီးကြတဲ့မိသားစုနှစ်စုဖြစ်ပါတယ် ကူရီရန်မိသားစုမှာအီချိုဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိပြီး ကူရီရန်မိသားစုမှာအန်နာဆိုတဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် နှစ်ယောက်လုံးဟာခေတ်ဆန်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကိုသိပ်ပြီးတော့ စိတ်မဝင်စားကြတဲ့သူတွေပါ သူတို့မိဘတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေပေမယ့်လည်း နှစ်ယောက်လုံးကအချင်းချင်းစိတ်မဝင်စားဘူး လက်မထပ်ချင်ဘူးလို့ငြင်းဆိုနေတာကြောင့် မိဘတွေကလက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်တော့အီချိုနဲ့အန်နာတို့နှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာခိုးပြီးတော့တွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်မထပ်ဘဲဘဝကိုပျော်ပျော်နေချင်သေးပေမယ့်တစ်ရက်မှာတော့ မထင်မှတ်ထားဘဲအန်နာတစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်ရသွားပါတော့တယ် အန်နာနဲ့အီချိုတို့နှစ်ယောက်သူတို့မိဘတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ပြောမလဲ သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကလွယ်ကူနိုင့်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 2.6GB,1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Family,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 7.5/10 45721 votes
The Royal Treatment (2022) ##unicode The Royal Treatmentဇာတျကားမှာတော့ အီတလီသူလေး Isabellaဟာ အမနေဲ့အဖှားနဲ့အတူ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ New Yorkမှာ အလှပွငျဆိုငျလေးတဈခုဖှငျ့ထားတာဖွဈပါတယျ။တဈနမှေ့ာတော့ Lavaniaက မငျးသားThomasဟာ စစေ့ပျပှဲအတှကျ New Yorkကိုရောကျလာခဲ့ပွီးတော့ ဆံပငျညှပျဖို့အတှကျ Isabellaတို့ဆိုငျကို ဖုနျးမှားချေါမိခဲ့တယျ။ မငျးသားသောမတျဈက ဆံပငျလာညှပျတဲ့Isabellaရဲ့ပှငျ့လငျးပွီးစိတျထားကောငျးတဲ့ပုံစံကို သဘောကသြှားပွီးတော့ သူ့မင်ျဂလာဆောငျမှာ ဆံပငျမိတျကပျပွငျပေးဖို့အတှကျ Isabellaတို့ကို Lavaniaကို ဖိတျချေါခဲ့တယျ။ ပှငျ့လငျးပွီးပြျောပြျောနတေတျတဲ့ Isabellaနဲ့ စညျးမဉျြးတှကွေားမှာဘဲ ပိတျမိနတေဲ့မငျးသားThomasတို့က အခြိနျအနညျးငယျအတှငျးမှာ ခငျမငျရငျးနှီးသှားပွီး အခငျြးခငျြးသဘောကသြှားခဲ့တယျ။ဒါပမေဲ့ မငျးသားThomasက နှဈပတျအတှငျးမိဘတှေ စီစဉျပေးထားတဲ့Laruenဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးလေးနဲ့ လကျထပျရတော့မှာပါ။မငျးသားThomasနဲ့ Isabellaတို့ရဲ့ အခဈြရေးခရီးလမျးဖွောငျ့ဖွူးပါ့မလားဆိုတာကို ဆကျလကျကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi The Royal Treatmentဇာတ်ကားမှာတော့ အီတလီသူလေး Isabellaဟာ အမေနဲ့အဖွားနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ New Yorkမှာ အလှပြင်ဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ Lavaniaက မင်းသားThomasဟာ စေ့စပ်ပွဲအတွက် New Yorkကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ ဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက် Isabellaတို့ဆိုင်ကို ဖုန်းမှားခေါ်မိခဲ့တယ်။ မင်းသားသောမတ်စ်က ဆံပင်လာညှပ်တဲ့Isabellaရဲ့ပွင့်လင်းပြီးစိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုံစံကို သဘောကျသွားပြီးတော့ သူ့မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဆံပင်မိတ်ကပ်ပြင်ပေးဖို့အတွက် Isabellaတို့ကို Lavaniaကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ပွင့်လင်းပြီးပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ Isabellaနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကြားမှာဘဲ ပိတ်မိနေတဲ့မင်းသားThomasတို့က အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးသွားပြီး အချင်းချင်းသဘောကျသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ မင်းသားThomasက ...
The King’s Daughter (2022) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့အမရေိကနျစာရေးဆရာ Vonda N. McIntyre ရဲ့နာမညျကွီးဝတ်တုဖွဈတဲ့ "The Moon and The Sea" ဆိုတဲ့ဆုပေါငျးမြားစှာသိမျးပိုကျထားတဲ့စာအုပျကိုပွနျပွီးတော့ပုံဖျောရိုကျကူးထားတဲ့ "The King's Daughter" ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ မငျးသားကွီး Pierce Brosnan နဲ့ Pirates of the Caribbean ကားထဲကမငျးသမီး Kaya Scodelario တို့က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ပွငျသဈနိုငျငံရဲ့ဘုရငျကွီးလူးဝဈ ၁၄ ဟာမသနေိုငျတဲ့ဘဝကို ရရှိဖို့အတှကျထာဝရရှငျသနျနိုငျတဲ့စှမျးအားရှိတယျလို့ယုံကွညျထားတဲ့ရသေူမတဈကောငျကိုဖမျးပွီးနကွေတျတဲ့အခြိနျမှာ စတေးဖို့လုပျထားပါတယျဘုရငျကွီးဟာဆိုရငျပှဲကငျြးပတဲ့နရောမှာနှဈပေါငျးမြားစှာလူမသိအောငျဖှကျထားတဲ့ သူ့ရဲ့သမီးမယျရီဂြိုးဆကျဖျကိုပှဲထုတျခငျြတဲ့အတှကျသူစှနျ့ပဈထားတဲ့ဘုရားကြောငျးကနသှေားပွီးတော့ချေါလာခိုငျးခဲ့ပါတယျ မယျရီဂြိုးဆကျဖျဟာနနျးတျောကွီးကိုရောကျပွီးတဈညမှာတော့သူ့ကိုတဈနရောကနခေျေါနတေဲ့အသံလိုမြိုးကွားရပါတယျ ဒီလိုနဲ့ သှားကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ရသေူမဖွဈနတောကိုသိလိကျရပါတော့တယျ မယျရီဂြိုးဆကျဖျတဈယောကျရသေူမနဲ့ တဖွညျးဖွညျးရငျးနှီးလာကွတဲ့အခါကမြှ သူ့အဖဟောရသေူမကိုသူ့ရဲ့ထာဝရရှငျသနျမှုအတှကျသတျဖွတျတော့မယျဆိုတာကိုသိလိုကျရပါတယျ မယျရီဂြိုးဆကျဖျတဈယောကျ ရသေူမကိုသူ့အဖလေကျထဲကနဘေယျလိုကယျတငျသှားမလဲ ဘုရငျကွီးလကျထဲကလှတျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမေရိကန်စာရေးဆရာ Vonda N. McIntyre ရဲ့နာမည်ကြီးဝတ္တုဖြစ်တဲ့ "The Moon and The Sea" ဆိုတဲ့ဆုပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ "The King's Daughter" ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် မင်းသားကြီး Pierce Brosnan နဲ့ Pirates of the Caribbean ကားထဲကမင်းသမီး Kaya Scodelario တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ကြီးလူးဝစ် ၁၄ ဟာမသေနိုင်တဲ့ဘဝကို ရရှိဖို့အတွက်ထာဝရရှင်သန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့ရေသူမတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးနေကြတ်တဲ့အချိန်မှာ စတေးဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဘုရင်ကြီးဟာဆိုရင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလူမသိအောင်ဖွက်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့သမီးမယ်ရီဂျိုးဆက်ဖ်ကိုပွဲထုတ်ချင်တဲ့အတွက်သူစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းကနေသွားပြီးတော့ခေါ်လာခိုင်းခဲ့ပါတယ် မယ်ရီဂျိုးဆက်ဖ်ဟာနန်းတော်ကြီးကိုရောက်ပြီးတစ်ညမှာတော့သူ့ကိုတစ်နေရာကနေခေါ်နေတဲ့အသံလိုမျိုးကြားရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရေသူမဖြစ်နေတာကိုသိလိက်ရပါတော့တယ် မယ်ရီဂျိုးဆက်ဖ်တစ်ယောက်ရေသူမနဲ့ တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာကြတဲ့အခါကျမှ သူ့အဖေဟာရေသူမကိုသူ့ရဲ့ထာဝရရှင်သန်မှုအတွက်သတ်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ် မယ်ရီဂျိုးဆက်ဖ်တစ်ယောက် ...
A Boy Called Christmas (App member only) ##unicode A boy called Christmas ဇာတျကားမှာတော့ Nikolasဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ သဈခုတျသမားအဖနေဲ့အတူ တောအုပျအလယျမှာ နထေိုငျသူဖွဈပါတယျ။တဈနမှေ့ာတော့ သူတို့တိုငျးပွညျက ဘုရငျကွီးက ပွညျသူပွညျသားတှကေို ‌ဆငျ့ချေါပွီးတော့ သူတို့တိုငျးပွညျမှာ ပြျောရှငျမှုတှေ ပြောကျကှယျနတော ကွာနတေဲ့အတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြတှပွေညျ့ဝတဲ့ မှျောဆနျတဲ့အရာတဈခုကို ရှာလာဖို့အမိနျ့ပေးခဲ့တယျ။ ဆငျးရဲတဲ့Nikolasအဖဟော ဘုရငျကွီးပေးတဲ့ ဆုကွေးငှရေဖို့အတှကျ မုဆိုးတှနေဲ့အတူ နတျသူငယျတှနေထေိုငျတဲ့ Elfhelmကိုရှာဖှဖေို့ ‌မွောကျပိုငျးအရပျကိုထှကျသှားခဲ့တယျ။Nikolasတဈယောကျကတော့ အနိုငျကငျြ့တတျတဲ့ အဒျေါဖွဈသူနဲ့ကနျြခဲ့ကာ အလုပျတှအေခိုငျးခံခဲ့ရတယျ။သူ့အမခြေုပျပေးခဲ့တဲ့ ဦးထုပျလေးမှာ Elfhelmကို သှားတဲ့မွပေုံရှိနတောကို Nikolasတဈယောကျရှာတှသှေ့ားတဲ့အခါ အဖဖွေဈသူကို မွပေုံပေးဖို့အတှကျ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးကွှကျလေးနဲ့အတူ နှဈယောကျတညျး မွောကျပိုငျးအရပျကို ခရီးထှကျလာခဲ့တယျ။ Nikolasတဈယောကျ နတျသူငယျတှနေထေိုငျတဲ့ Elfhelmကို ရှာတှပေ့ါ့မလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုပါအုံး။ ##zawgyi A boy called Christmas ဇာတ်ကားမှာတော့ Nikolasဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ သစ်ခုတ်သမားအဖေနဲ့အတူ တောအုပ်အလယ်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့တိုင်းပြည်က ဘုရင်ကြီးက ပြည်သူပြည်သားတွေကို ‌ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ သူတို့တိုင်းပြည်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ကွယ်နေတာ ကြာနေတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ဝတဲ့ မှော်ဆန်တဲ့အရာတစ်ခုကို ရှာလာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ဆင်းရဲတဲ့Nikolasအဖေဟာ ဘုရင်ကြီးပေးတဲ့ ဆုကြေးငွေရဖို့အတွက် မုဆိုးတွေနဲ့အတူ နတ်သူငယ်တွေနေထိုင်တဲ့ Elfhelmကိုရှာဖွေဖို့ ‌မြောက်ပိုင်းအရပ်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။Nikolasတစ်ယောက်ကတော့ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့ကျန်ခဲ့ကာ ...
The Last Warrior: Root of Evil (App member only) ##unicode The Last warrior-Root of Evilကတော့ 2017တုနျးကထှကျရှိခဲ့တဲ့ The Last warriorရဲ့ဒုတိယပိုငျးဖွစိပါတယျ။ ဇာတျလမျးကတော့ Evanတဈယောကျဟာ Vasillisaနဲ့ ပြျောရှငျစှာနထေိုငျနတေုနျးမှာ သူ့အစခေံဟောငျးGalinaနဲ့အတူ Varvaraဟာ သူတို့မွို့ကိုလာတိုကျခိုကျကွတယျ။Galinaနဲ့Varvaraတို့နှဈယောကျဟာ Koscheiသတျခဲ့တဲ့ မှျောဆရာကို ခစားနကွေတဲ့လူတှဖွေဈပါတယျ။Galinaနဲ့Varvaraတို့ရဲ့ သခငျကိုနှိမျနငျးနိုငျဖို့အတှကျ Evanနဲ့ Vasillisaဟာ Koscheiရှိနတေဲ့ သခွေငျးတရားနယျမွကေို ခရီးထှကျလာခဲ့ရတယျ။ Evanဟာ စဈသညျတျောတဈယောကျဖွဈဖို့ စှမျးအားလဲမရှိသေးတဲ့အပွငျ အဲ့အခြိနျမှာဘဲသူ့မှျောဓားဟာစှမျးအားခနျးခွောကျသှားရတော့တယျ။ ပွနျလမျးမရှိအောငျ အန်တရာယျမြားတဲ့ သခွေငျးတရားနယျမွကေို မှျောဓားအစှမျးမရှိဘဲ Evanတို့‌ဘယျလိုရောကျအောငျသှားမလဲ။ Evanရဲ့ သူရဲကောငျးစှမျးအားကိုရောရှာတှပေ့ါ့မလား။Galinaနဲ့Varvaraတို့ရဲ့ သခငျကိုနှိမျနငျးပွီး လူတှကေိကယျတငျနိုငျပါ့မလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi The Last warrior-Root of Evilကတော့ 2017တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Last warriorရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Evanတစ်ယောက်ဟာ Vasillisaနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတုန်းမှာ သူ့အစေခံဟောင်းGalinaနဲ့အတူ Varvaraဟာ သူတို့မြို့ကိုလာတိုက်ခိုက်ကြတယ်။Galinaနဲ့Varvaraတို့နှစ်ယောက်ဟာ Koscheiသတ်ခဲ့တဲ့ မှော်ဆရာကို ခစားနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။Galinaနဲ့Varvaraတို့ရဲ့ သခင်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက် Evanနဲ့ Vasillisaဟာ Koscheiရှိနေတဲ့ သေခြင်းတရားနယ်မြေကို ခရီးထွက်လာခဲ့ရတယ်။ Evanဟာ စစ်သည်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စွမ်းအားလဲမရှိသေးတဲ့အပြင် အဲ့အချိန်မှာဘဲသူ့မှော်ဓားဟာစွမ်းအားခန်းခြောက်သွားရတော့တယ်။ ပြန်လမ်းမရှိအောင် အန္တရာယ်များတဲ့ သေခြင်းတရားနယ်မြေကို မှော်ဓားအစွမ်းမရှိဘဲ Evanတို့‌ဘယ်လိုရောက်အောင်သွားမလဲ။ Evanရဲ့ ...
IMDB: 5.9/10 678 votes
Nightbooks (2021) ##unicode အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ဇာတျကားကတော့ သဘာဝလှနျဇာတျကားဖွဈပွီး ကွောကျစရာပုံပွငျတှရေေးရတာကွိုကျတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျအကွောငျးရိုကျကူးထားတာပဲဖွဈပါတယျ အဲလကျဈဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ ကွောကျစရာပုံပွငျတှကေိုစှဲလမျးသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အားလုံးက သူ့ကိုထူးဆနျးတဲ့ ငကွောငျလို့သတျမှတျခဲ့ကွပါတယျ တဈနေ့ သူ စိတျအရမျးညဈသှားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ပုံပွငျစာအုပျကိုမီးရိူ့ပဈဖို့ကွံစညျခဲ့ပါတယျ အဲဒီအခြိနျမှာ စုနျးမက သူ့ကိုတိုကျခနျးတဈခုကို ဖွားယောငျးချေါလာခဲ့ပါတယျ စုနျးမကွီးက ကွောကျစရာပုံပွငျတှကေိုနှဈသကျသူပါ ညတိုငျးပုံပွငျနားထောငျပွီးမှအိပျရာဝငျတတျပါတယျ စုနျးမရဲ့တိုကျခနျးထဲမှာ အဲလကျဈနဲ့အတူရကျစမငျဆိုတဲ့ မိနျးကလေးပါပိတျမိနခေဲ့ပါတယျ အဲလကျဈက ညတိုငျး စုနျးမကို သူ့စာအုပျထဲကပုံပွငျတှပွေောပွခဲ့ပါတယျ မပွောရငျအသတျခံရမှာမို့ပါ ဒါပမေယျ့ စိတျဒဏျရာရခဲ့တဲ့အဲလကျဈတဈယောကျ ပုံပွငျအသဈတော့မရေးနိုငျခဲ့ပါဘူး တဈနေ့ အဲလကျဈရဲ့ပုံပွငျစာအုပျ မထငျမှတျဘဲ အကောငျတဈကောငျဖကျြစီးတာခံလိုကျရတဲ့အခါ ဘယျလိုဆကျဖွဈမလဲ အဲလကျဈနဲ့ရကျစမငျ စုနျးမလကျထဲကထှကျပွေးဖို့ ဘယျလိုကွံကွမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားထဲမှာ ဆကျလကျအားပေးကွညျ့ရူကွပါဦးနျော ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ သဘာဝလွန်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ကြောက်စရာပုံပြင်တွေရေးရတာကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲလက်စ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ကြောက်စရာပုံပြင်တွေကိုစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက သူ့ကိုထူးဆန်းတဲ့ ငကြောင်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ် တစ်နေ့ သူ စိတ်အရမ်းညစ်သွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ပုံပြင်စာအုပ်ကိုမီးရိူ့ပစ်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ စုန်းမက သူ့ကိုတိုက်ခန်းတစ်ခုကို ဖြားယောင်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ် စုန်းမကြီးက ကြောက်စရာပုံပြင်တွေကိုနှစ်သက်သူပါ ညတိုင်းပုံပြင်နားထောင်ပြီးမှအိပ်ရာဝင်တတ်ပါတယ် စုန်းမရဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာ အဲလက်စ်နဲ့အတူရက်စမင်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးပါပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ် အဲလက်စ်က ညတိုင်း စုန်းမကို သူ့စာအုပ်ထဲကပုံပြင်တွေပြောပြခဲ့ပါတယ် မပြောရင်အသတ်ခံရမှာမို့ပါ ဒါပေမယ့် စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဲလက်စ်တစ်ယောက် ပုံပြင်အသစ်တော့မရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး တစ်နေ့ အဲလက်စ်ရဲ့ပုံပြင်စာအုပ် မထင်မှတ်ဘဲ အကောင်တစ်ကောင်ဖျက်စီးတာခံလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ အဲလက်စ်နဲ့ရက်စမင် စုန်းမလက်ထဲကထွက်ပြေးဖို့ ဘယ်လိုကြံကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်အားပေးကြည့်ရူကြပါဦးနော် Review – ...
IMDB: 5.6/10 2.1k votes
Moonbound (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ စိတျအပနျးပွကွေညျ့ရှုနိုငျဖို့အတှကျကာတှနျးကားလေးတဈကားကိုရှေးခယျြထားပါတယျ ဒီကားလေးဟာဆိုရငျဂြာမနျနာမညျကွီးဝတ်ထုစာအုပျ ဖွဈတဲ့Little Peter's Journey To The Moonဆိုတဲ့ စာအုပျကိုအခွခေံပွီး ရိုကျကူးတငျဆကျထားတာဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ပီတာနဲ့ သူ့ရဲ့ညီမလေးအနျဟာသိပျပွီးတော့မတညျ့ကွပါဘူး အကွောငျးကတော့အနျဟာအရမျးကိုစကားမြားပွီး စိတျရှုပျစရာကောငျးတယျလို့ပီတာတဈယောကျထငျနလေို့ပါ အထူးသဖွငျ့အနျရဲ့စိတျကူးယဉျတတျမှုကိုပီတာတဈယောကျစိတျအပကျြဆုံးပါ ဒါပမေယျ့တဈညမှာတော့ အနျကိုပိုးကောငျကွီးတဈကောငျကလာချေါသှားတဲ့အတှကျပီတာတဈယောကျသူတို့နောကျကိုလိုကျရငျး လကမ်ဘာပျေါကိုရောကျသှားပါတယျ ပီတာတဈယောကျသူ့ညီမပွောနတေဲ့စိတျကူးယဉျပုံပွငျတှဟောတကယျရှိမှနျးသိသှားပါတော့တယျ ပီတာတို့နှဈယောကျဘယျလိုထူးဆနျးတာတှကွေုံရမလဲ ဘယျလိုစှနျ့စားခနျးတှထှေကျကွဉီးမလဲဆိုတာကိုစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ ကာတှနျးကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စိတ်အပန်းပြေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကာတွန်းကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင်ဂျာမန်နာမည်ကြီးဝတ္ထုစာအုပ် ဖြစ်တဲ့Little Peter's Journey To The Moonဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ပီတာနဲ့ သူ့ရဲ့ညီမလေးအန်ဟာသိပ်ပြီးတော့မတည့်ကြပါဘူး အကြောင်းကတော့အန်ဟာအရမ်းကိုစကားများပြီး စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်လို့ပီတာတစ်ယောက်ထင်နေလို့ပါ အထူးသဖြင့်အန်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်တတ်မှုကိုပီတာတစ်ယောက်စိတ်အပျက်ဆုံးပါ ဒါပေမယ့်တစ်ညမှာတော့ အန်ကိုပိုးကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကလာခေါ်သွားတဲ့အတွက်ပီတာတစ်ယောက်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ရင်း လကမ္ဘာပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ် ပီတာတစ်ယောက်သူ့ညီမပြောနေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တွေဟာတကယ်ရှိမှန်းသိသွားပါတော့တယ် ပီတာတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုထူးဆန်းတာတွေကြုံရမလဲ ဘယ်လိုစွန့်စားခန်းတွေထွက်ကြဉီးမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ကာတွန်းကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Animation,Family Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Go Back (2021) ##unicode Go Back(2021)ဒီကားလေးက cast တှကေတော့ မငျးသမီး Park Ha Sun,Ha Yoon Kyungနဲ့ ကလေးသရုပျဆောငျ Gam So Hyun တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ rating ကလညျး 7.5 ရရှိထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ နှရောသီတဈနမှေ့ာ ကလေးတဈယောကျပွနျပေးဆှဲခံလိုကျရပါတယျ ပွနျပေးဆှဲသမားက ပွညျသူတဈယောကျ ဒျေါလာ၁ထောငျစီနဲ့ ဒျေါလာ၁သိနျးကို လူမှုရေးစငျတာကို ထူးဆနျးစှာလှူခိုငျးပါတယျအို့ဆှနျးက နှိပျစကျခံရတဲ့ကလေးတှအေပျေါ အရမျးဂရုစိုကျပေးတဲ့ဆရာမတဈယောကျပါ ဂြီဝနျက အမှနျတရားအတှကျဆို ဘာမဆိုလုပျတဲ့ရဲမတေဈဦးပါ သူတို့နှဈယောကျ တဈနမေ့ထငျမှတျဘဲတှဆေုံ့ရငျး ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကို စိတျဝငျတစားကွညျ့ရှုရမယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကောငျးဖွဈပွီး ကလေးတှအေပျေါ မိဘတှနှေိပျစကျမှုကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားတဈကားလညျးဖွဈပါတယျ ##zawgyi Go Back(2021)ဒီကားလေးက cast တွေကတော့ မင်းသမီး Park Ha Sun,Ha Yoon Kyungနဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် Gam So Hyun တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် rating ကလည်း 7.5 ရရှိထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နွေရာသီတစ်နေ့မှာ ကလေးတစ်ယောက်ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ် ပြန်ပေးဆွဲသမားက ပြည်သူတစ်ယောက် ဒေါ်လာ၁ထောင်စီနဲ့ ဒေါ်လာ၁သိန်းကို လူမှုရေးစင်တာကို ထူးဆန်းစွာလှူခိုင်းပါတယ်အို့ဆွန်းက နှိပ်စက်ခံရတဲ့ကလေးတွေအပေါ် အရမ်းဂရုစိုက်ပေးတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ပါ ဂျီဝန်က ...
Smelliville (2021) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ ကလေးလူကွီးအားလုံးအကွိုကျတှမေ့ယျ့ animation movieကောငျးလေးပဲဖွဈပါတယျ မကျဈတို့နတေဲ့ smellivileဆိုတဲ့မွို့မှာ အနံ့အသကျဆိုးဝါးလှတဲ့အမှိုကျပုံကွီးရှိနတောကွောငျ့ မွို့သူမွို့သားတှအေားလုံး အိမျပွငျမထှကျနိုငျဘဲ အခကျကွုံနရေပါတယျ မကျဈတို့ကတော့ ဒီအမှိုကျပုံကွီးကိုဖွရှေငျးဖို့နညျးလမျးကိုရှာဖှနေခေဲ့တာပါ တဈနေ့ Ogglyဆိုတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိမျးနဲ့မိသားစုတဈစု သူတို့မွို့ကိုရောကျလာခဲ့ပါတယျ Ogglyတှကေ အမှိုကျစားတဲ့သတ်တဝါတှဖွေဈတော့ အမှိုကျပုံကွီးရှိနတေဲ့မွို့က သူတို့အကွိုကျပါပဲ ဒါပမေယျ့ အဲဒီအမှိုကျပုံကွီးရှိတဲ့နရောမှာ အဆောကျအဦးဆောကျပွီး Ogglyတှကေိုနှငျထုတျဖို့ကွံနတေဲ့ မစ်စတာဟမျမာနဲ့ မကျဈရဲ့အမေ မွို့တျောဝနျက‌တျောကွောငျ့ ဘယျလိုအခကျအခဲတှကွေုံလာရမလဲဆိုတာတော့ ဒီဇာတျကားထဲမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရူရမှာပဲဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ ကလေးလူကြီးအားလုံးအကြိုက်တွေ့မယ့် animation movieကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် မက်စ်တို့နေတဲ့ smellivileဆိုတဲ့မြို့မှာ အနံ့အသက်ဆိုးဝါးလှတဲ့အမှိုက်ပုံကြီးရှိနေတာကြောင့် မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံး အိမ်ပြင်မထွက်နိုင်ဘဲ အခက်ကြုံနေရပါတယ် မက်စ်တို့ကတော့ ဒီအမှိုက်ပုံကြီးကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေခဲ့တာပါ တစ်နေ့ Ogglyဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိမ်းနဲ့မိသားစုတစ်စု သူတို့မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် Ogglyတွေက အမှိုက်စားတဲ့သတ္တ၀ါတွေဖြစ်တော့ အမှိုက်ပုံကြီးရှိနေတဲ့မြို့က သူတို့အကြိုက်ပါပဲ ဒါပေမယ့် အဲဒီအမှိုက်ပုံကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ အဆောက်အဦးဆောက်ပြီး Ogglyတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ကြံနေတဲ့ မစ္စတာဟမ်မာနဲ့ မက်စ်ရဲ့အမေ မြို့တော်ဝန်က‌တော်ကြောင့် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံလာရမလဲဆိုတာတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Animation,Aventure,Family Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard ...
IMDB: N/A/10 25 votes
Hungama2(2021) ##unicode ဒီတဈခါ နောကျဆုံးအသဈထှကျရှိလာပွီး နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှအေမြားကွီးပါတဲ့ အခဈြဟာသဇာတျကားကောငျးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ မိသားစုတှငျး အလှဲတှကေိုရိုကျကူးပုံဖျောပွထားလို့ ဟာသတှနေဲ့ စိတျအပနျးဖွရေမှာပါ မွေးဆိုးလေး ၄ယောကျကိုထိနျးကြောငျးရငျး အမွဲခေါငျးကိုကျနရေတဲ့အိမျကို နောကျထပျအရူပျထုပျပွဿနာတဈခုရောကျရှိလာပါတယျ ထိုအိမျကသားဖွဈသူ အာကကျရျှရဲ့ကလေးပါဆိုပွီး ဗာနီဆိုတဲ့မိနျးကလေးက ကလေးပိုကျပွီးရောကျလာခဲ့ပါတယျ အာကကျရျှနဲ့ဗာနီက ကောလိပျမှာ ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့ဖူးပါတယျ ၃နှဈကွာပွီးမှ အာကကျရျှရဲ့ကလေးနဲ့ ဗာနီရောကျလာခဲ့ပုံက လုံးဝပဟဠေိဆနျနခေဲ့ပါတယျ အာကကျရျှမှာလညျး လူကွီးခငျြးသဘောတူထားတဲ့ မိနျးကလေးရှိနတေဲ့အခါ ဘယျလိုအလှဲတှဆေကျဖွဈမှာလဲ ပွဿနာတှတေတျ ဗြာမြားနရေတဲ့ အာကကျရျှနဲ့ အာကကျရျှရဲ့မိသားစုအရူပျတျောပုံကို ရယျနရေမယျ့ဇာတျကားကောငျးဖွဈလို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ရှိလာပြီး နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးပါတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်ကားကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် မိသားစုတွင်း အလွဲတွေကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ပြထားလို့ ဟာသတွေနဲ့ စိတ်အပန်းဖြေရမှာပါ မြေးဆိုးလေး ၄ယောက်ကိုထိန်းကျောင်းရင်း အမြဲခေါင်းကိုက်နေရတဲ့အိမ်ကို နောက်ထပ်အရူပ်ထုပ်ပြဿနာတစ်ခုရောက်ရှိလာပါတယ် ထိုအိမ်ကသားဖြစ်သူ အာကက်ရ်ှရဲ့ကလေးပါဆိုပြီး ဗာနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးက ကလေးပိုက်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ် အာကက်ရ်ှနဲ့ဗာနီက ကောလိပ်မှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ၃နှစ်ကြာပြီးမှ အာကက်ရ်ှရဲ့ကလေးနဲ့ ဗာနီရောက်လာခဲ့ပုံက လုံးဝပဟေဠိဆန်နေခဲ့ပါတယ် အာကက်ရ်ှမှာလည်း လူကြီးချင်းသဘောတူထားတဲ့ မိန်းကလေးရှိနေတဲ့အခါ ဘယ်လိုအလွဲတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ ပြဿနာတွေတတ် ဗျာများနေရတဲ့ အာကက်ရ်ှနဲ့ အာကက်ရ်ှရဲ့မိသားစုအရူပ်တော်ပုံကို ရယ်နေရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် Review – Hmue File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Comedy,Romance Subtitle : Myanmar ...